नौलो बिषयको ऐतिहासिक नेपाली महाकाव्य "विजयवती" आउदै
नौलो बिषयको ऐतिहासिक नेपाली महाकाव्य “विजयवती” आउदै
February 2, 2018 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments महाकाव्य, विजयवती
साहित्यकार तथा लेखक कृष्ण प्रसाईको नौलो बिषयको ऐतिहासिक नेपाली महाकाव्य “विजयवती” बजारमा आउने भएको छ ।
महाभारत बर्षमा ब्रम्हाका पनाति मनु, मनुबाट चक्रवर्ती इक्ष्वाकु, त्यसपछि श्रीविकुक्षी, अनि ककुस्थ राजा भए । ककुस्थ पछि विश्वगश्व, र उनीपछि २८ राजा छोडेर सगर, पछि असमञ्जस, अनि अंशुमान् अनि उनले दीलिप जन्माए । दिलिप पछि भगिरथ, उनैका नाति रघु, पनाती अज, अजबाट दशरथ र राम, लब हुँदै ८ पुस्तामा लिच्छवि राजा भए।
तिनै लिच्छ्बीका ३६ औ पुस्ता सुपुष्प। पछि भारतबाट अजात सत्रुले बैशालीका लिच्छवि राजालाई खेदाए र धेरै चेटक कुवामा फाल हानी मरे र बाकी उत्तर हिमालय यता आए। सुपुष्पका २३ औ पुस्ता पछि जयदेव, र जयदेव पछि १६ पुस्ता मानदेव, उनीपछि छोरा महीदेव, नाति बसन्तदेब सम्मको कुरा छ। यसै बीचमा प्राचीन आर्यवर्ती नारी विजयवती हुन्। तिनै विजयवतीको विवाह वार्तपुत्र देभलाभसँग भयो । यिनैसँग जोडिएको सत्य कथा र जीवन छ यो “विजयवती” महाकाव्यमा ।
← भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल भ्रमणमा आएर सवभन्दा पहिला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्नुलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?
जनमत सर्वेक्षण – भारतले धेरै समयपछि बल्ल आएर नेपालको संविधानलाई स्वीकार्नुलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ? →
मेलम्चिलाई हाम्रो निम्तो
October 29, 2016 साइन्स इन्फोटेक 0
पर्वको बेला मन दुख्यो
August 23, 2017 साइन्स इन्फोटेक 0
January 13, 2018 साइन्स इन्फोटेक 0